WASHINGTONIA: SAWIRADA IYO SHARAXAADAHA, TAYADA KORRIINKA IYO DARYEELKA GURIGA - DHIRTA GUDAHA
Washingtonia: Qaababka Daryeelka Guriga
Washingtonia waa geed caleenta ah oo daaqa ah, oo ah quruxda qalaad ee qalaad ee gudaha gudaha. Maqaalkani wuxuu ku siinayaa talooyin, kaas oo aad ku kori kartid geed lalmad badan, ma aha oo keliya aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin sidoo kale gurigaaga.
Washingtonia waa geed caleen ah oo dhulkiisa hooyo yahay Central America. Nooc calaacal ah ayaa magaciisa ku helay magac sharaf ka ah madaxwaynaha ugu horreeya ee Maraykanka George Washington.
Dhirta dhirta dhuxusha waxay gaari kartaa koritaanka soddon-mitir. Baadhitaanku wuxuu daboolayaa hadhaaga caleemaha la qalajiyey. Aagga isbedelka xididada ee asliga ah waxaa laga yaabaa in uu ku yaala gobolka ee xididdada adventitious. Taarbo badan oo waraaqo ah - ilaa 1.5 mitir dhererka; waxay u eg yihiin taageere furan, maadaama ay gooyeen bartamaha.
Ma taqaanaa? Guriga, qaybaha Washington waxaa loo isticmaalaa karinta. Dadka deegaanka waxay qoyaan abuurka oo bur burin, caws ahna la kariyey ama la wada baabbi'iyey.
Inta lagu jiro muddada ubax, dalagga dalagyo ubax bisexual ah, oo ku yaal on jirida ubaxa sare. Inflorescence waa panicle, kaas oo ah xilliga bisaylkiisa foomamka miro guduud ah.
Washington Palm Varieties
Seynisyahanadu waxay ogyihiin kaliya laba nooc oo Washington ah:
Filamadu (Cordy, Californian Fan Palm) - Noocyo abuuraya kaymaha oo dhan oo ku nool deegaan dabiici ah. Caleenta geedkan waxaa lagu kala soocay hooska cagaarka cagaaran oo leh tiro badan oo ah kuwa ugu wanaagsan ee barafka cad.
Robusta (faro badan oo xoog leh) - noocyada dheer, inta badan waxay gaadhaan 30 mitir oo dherer ah. Qaybta jeexan ee geedku wuxuu ku yaalaa xagga sare ee jirga waxana uu leeyahay qaab muuqaal ah. Caleenta cagaaran waa mid cagaaran, laakiin aan laheyn caddad cad. Caleemaha caleen waxay leeyihiin qodxo.
Xaaladaha koritaanka guriga
Aad bay u adag tahay in lagu soo saaro Washington DC guri ama guri. Dhibaatooyinka waaweyni waxay ku jiraan xajmiga dhirta iyo baahida loo qabo in la hubiyo in badan oo iftiin ah.
Meesha ugu fiican ee qolka fadhiga ee maaddada geedo timir ah - daaqadaha bari ama galbeedka. Iftiin ayaa loo baahan yahay iftiin, laakiin raajada qorraxda waa in la kala firdhiyaa, aan toos ahayn. Maalmaha xagaaga ee kuleylka ah oo aan kululeyn, waxaa fiican in aad ubax u qaadato geeska.
Washington ma taagna dabaysha, laakiin waxay u baahan tahay helitaanka hawo cusub.
Heerkulka iyo qoyaanka
Xilliga gu'ga iyo xagaaga, dhaqanku wuxuu u baahan yahay heerkul ah + 20 ... + 24 ° C. Maalmo markay muujinayaan heerkulka ka sarreeya calaamadda + 30 ° C, u wareeji geedka meel leh heerkulo la aqbali karo. Xilliga jiilaalka, marka geedka timirta uu istaago, + 10 ° S waa ku filan tahay. Iyo xataa habka + 5 ... + 7 ° C, Washington waxay dareemeysaa raaxo.
Ma taqaanaa? Qowmiyado badan oo ka soo jeeda wakhtiyadii hore, geed cagaarka ah ayaa loo tixgeliyaa calaamad ah guul iyo nabad. Iyadoo ay weheliyaan ubaxyo laacib ah, guusha dagaalka ayaa la siiyay laan farir ah.
Warshadu waxay u dulqaadan kartaa microclimate qalafsan oo qalalan. Laakiin waqti isku mid ah, waxa ay ka soo horjeedaa in la isku buufiyo taajkii oo lagu tirtiro caleemaha qoryaha qoyan, gaar ahaan cimilada kulul.
Markaad daryeesho dhaqanka la soo bandhigay, waxaa lagu hagaajiyaa xaaladaha dabiiciga ah ee koritaanka. In jawi raaxo leh laftiisa, geedkan timirta ah ayaa si firfircoon u koraya iyo horumarinta.
Xaaladaha hoosta ku yaala, geedaha timirta ayaa si fiican ugu kora waraabinta nidaamsan. Xilliga xagaaga, habka caadiga ah: dusha sare ee coma dhirta ayaa qalajiyey - wakhtigu wuxuu u yimid waraabinta joogtada ah. Laakiin ha u oggolaanin biyo-qashin iyo joogitaanka biyaha. Xilliga jiilaalka, biyaha ubax laba maalmood ka dib dharka ugu daadsan.
Habka ugu aqbali kara ee ciidda qoyaanka ayaa ka waraabiya korka iyadoo la adeegsanayo waraabin leh dhareer dheer. Isticmaal biyo diirran oo diiran, ama tuubo, laakiin difaac hore.
Xilliga xagaaga, waxaad siisaa Bacriminta macdanta leh mudo ah 1 jeer muddo 15 maalmood ah. "Akvarin" ama "Kemira Lux". Waxa kale oo aad isticmaali kartaa kakabka geedo timir ah - "Pocon", "Bona Forte".
Iyada oo habka qabow, si tartiib ah u yareyso inta jeer ee dhaymada. Xilliga jiilaalka, Bacriminta cagaaran ayaan loo baahnayn.
Waxaan kugula talinaynaa inaad akhrido daryeelka saxda ah ee timirta guriga.
Gooyashada kiisaska Washington ma aha nidaam khasab ah. Waxaa loo isticmaalaa marka la rabo, iyada oo ujeedadu tahay in yar yar ee ka hortagga dabiiciga ah ee caleenta. Kaliya talooyinka caleenta qalalan ayaa lagaa saarayaa. Haddii xaashida hore ay noqoto mid jaale ah, waa in la gooyaa.
Isbedelka ciidda waxaa lagu sameeyaa xaddiyo gaar ah. Haddii geedka uu ka yaryahay 7 sano, ku celceli 2 sano kasta, haddii ay ka badan tahay, hal mar 3 sano. Haddii ubaxa uu ka weyn yahay 15 sano, ka dibna waxaa loo baahan yahay in lagu shubo 5tii sanoba mar.
Aqoon dhirta dheri cusub dhammaadkii Nofeembar ama horraantii Maarso sida ku cad qorshahan soo socda:
Diyaarso dheri sare (weelasha hoose iyo kuwa aan qumanayn). Qeybta hoose ee dheriga waxaa laga rabaa heer sare oo dheecaan ah.
Ku dar substrate yar (2 qaybood oo ah sod, 2 qaybood oo ah ciidda caleen, 2 qaybood oo ah humus, 1 qayb oo ciid ah). Intaa waxaa dheer ku quudin ciidda leh xeryahooda dabiiciga ah.
Si taxadar leh uga saari ubaxa adoon jebin maskaxda dhulka.
U gudub daaqada dheriga cusub.
Ku dar qiyaasta ciidda cusub ee dhinaca dhinacyada, waxoogaa yareynaya.
Waa muhiim! Inta lagu guda jiro howsha gacanta, si taxaddar leh u shaqee, ka taxaddar inaadan ku dhaawacmin xididada. Iyo ku shub substrate on xididdada koraya inta lagu guda jiro koritaanka.
Habka kaliya ee lagu heli karo Washington DC cusub waa dhalashada taranka. Si tan loo sameeyo, abuur cusub ayaa lagu qooyay biyaha diirran ilaa 12 saacadood. Nidaamka ayaa kor u qaadaya geeddi-socodka fuulka cirifka.
Abuurka loo diyaariyey waxaa lagu beeray walxaha nafaqada leh, oo ka kooban jaangooyo siman ee dhoobada, balka, dhuxul iyo ciid cufan. Dhoobada ayaa horay loo cadayaa si loo baabi'iyo infakshanka fangas. Laga soo bilaabo korka abuur ah waxaa lagu daboolay substrate isla, lakabka 1 cm qaro weyn.
Dheriga leh geedo daboolay bac caag ah oo lagu meeleeyo meel gudcur leh heerkul ah inta u dhaxaysa + 25 ... + 28 ° C Mudada oo dhan sugitaanka geedo waxaa lagu hayaa qoyaan; geedo waa la duubayaa maalin kasta waxayna ka ilaaliyaan dhibcaha heerkulka iyo diyaarinta, gaar ahaan kuwa qabow.
Video: Kala-bixinta Seeds Washington
Haddii uu abuurku ahaa mid cusub, caleemaha kowaad waxay u muuqan doonaan horaantii 8-10 maalmood. Haddii kale, geedo waa inay sugaan wax ka badan hal bil, laakiin ma sugi kartid dhammaantood.
Iyadoo dhalashada ee caleemaha ugu horreeya ee geedo u baahan yihiin si tartiib ah. Doorashada nuqullada ugu caansan iyo xooggan, si taxadar leh ugu bedel qeybo yaryar (10-12 cm dhexroor) - si gooni ah. Waqti ka dib, waxaad ku kori doontaa geedka timirta oo buuxa.
Haddii xaaladaha xabsiyada aan la ogaanin (iyada oo qalalan aad u badan, dabaylaha, iyo sidoo kale waraabinta aan habooneyn), dhirta waxay noqotaa mid u nugul weerarrada caarada caarada, xajmiga, caarada, madadaalo. Haddii Washington mar horeba weeraro cayayaanka, isticmaal cayayaanka guud ee cayayaanka ee ka soo horjeeda cayayaan kasta. Isticmaal daroogooyinka sida waafaqsan tilmaamaha, si loo xoojiyo rabitaanka.
Baro sida loola tacaalo cayayaanka iyo cudurrada geedaha timirta ah.
Tirada cudurada saameynaya dhaqanka su'aasha ah waxaa ka mid ah caleenta caleenta iyo kallana casaan. Xaaladda kowaad, caleemaha ayaa la saameeyaa, taarikada ayaa ka sooci kara salka. Marka pink casaan ku engegaa caleemaha yar yar. Mararka qaarkood qudhus oo qudh ah. Cabbirrada lakabyada badanaa waxaa badanaa lagu arkaa dareeraha caaryada ah.
Tilmaamaha ugu horreeya ee cudurka, daawee calaacanka leh fungicides oo ay ku jiraan methyl thiophanate iyo mancozeb. Fasax u dhaxeeya daaweynta waa hal toddobaad. Daweeyo geedka illaa inta laga bogsanayo.
Si aad u xajiso qolka qolka, mulkiilayaashoodu waxay u baahan yihiin inay ogaadaan sida loo xalliyo dhibaatooyinka aasaasiga ah:
Xaaqidda talooyinka caleemaha. Dhibaatada waxaa lagu xalliyaa waraabinta waraabinta iyo bacriminta potash.
Inkasta oo lagu hagaajinayo xannaanada, caleemuhu waxay sii wadaan inay madoobaan. Xaaladdan, ku dhaji geed caleenta ah oo ku taal saxaarad biyo iyo faleebo marar badan.
Muuqashada muuqaalada ku yaal caleenta. Caadi heerkulka qolka meesha aad dhigatid geedo timir ah. Dhibaatadu waxay sidoo kale ka caawisaa in la baabi'iyo ku-beddelidda nidaam dhexdhexaad ah.
Marrar joogto ah iyo yaraynta caleenta. Ha ka welwelin arrintan. Caleenta, oo u dhintay qalalan dabiiciga ah, waa in laga saaraa.
Waa muhiim! Aad bay muhiim u tahay inaadan seegin dhibaato halis ah, iyada oo calaamadaha loo yaqaan 'natural wilt'. Waqti ka waqti, iska hubi calaamadaha gooyooyinka ay sababaan qoyaan xad dhaaf ah inta lagu jiro waraabinta.
Haddii aad jeceshahay dhirta qalaad, hubaal isku day inaad hesho Washington. In yar oo isku dayaysa, waxaad heli doontaa geed dabacsan, oo hubaal ah inuu yahay qurxinta ugu weyn ee gudaha qolka.